မြန်အောင်သား: Huawei Y300C Root and CWM Recovery
ကဲ...Huawei Y300C ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး Root လုပ်တဲ့ နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သေချာစမ်းသပ်ထားပြီးသားမို့ သူငယ်ချင်းတို့လည်း စိတ်ချလက်ချ သုံးနိုင်မှာပါ။
1. bootloader unlock လုပ်ခြင်း
2. CWM Recovery သွင်းခြင်း
3. Recovery mode မှ root လုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး bootloader unlock ရဖို့တော့ အရေးကြီးတယ်နော်။ မိမိဖုန်းက
1. MEID: ဥပမာ A00000xxxxxxxx (ဖုန်းဘက်ထရီအောက်မှာရှိပါတယ်)
2.S\_N : ဥပမာ E8B9MCxxxxxxxxxx (ဖုန်းဘက်ထရီအောက်မှာရှိပါတယ်)
3. Product ID : ဥပမာ 4578xxxx (ဖုန်းခေါ်သောနေရာတွင် *#*#1357946#*#* ဟုရိုက်ပါ။ပေါ်လာသော ဂဏန်း 8 လုံးသည် product ID ဖြစ်သည်)
တို့ကို မှတ်ထားပါ။အောက်ကလင့်မှာ ပုံထဲကပြထားတဲ့အတိုင်း လိုအပ်တာတွေဖြည့်ပါ။
ကဲဒါဆိုရင် unlock code ရဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေပို့ပေးပြီးပါပြီ။ ၂ ရက် ၃ ရက်စောင့်ရင် unlock code ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
unlock code ပြန်လာရင်တော့ အောက်က tool လေးကို download ဆွဲပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။
Download Huawei Unlock.exe
ဖုန်းရဲ့ USB Debugging ကို on ထားပါ။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ volume - နဲ့ power ခလုတ်ကိုတွဲနှိ်ပ်ပြီး ဖုန်းကိုဖွင့်ပါ။ ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာမှာ usb ကြိုးနဲ့ချိတ်ပါ။
အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း မေးလ်ထဲကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ unlock code 16 လုံးကို ရိုက်ပြီး enter နှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။ဖုန်းက restart ကျပြီးပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့...ပထမအဆင့် bootloader unlock လုပ်ခြင်းပြီးပါပြီ။
အရင်ဆုံး ဖုန်းမှာ usb debugging ကို on ထားလိုက်ပါ။ပြီးရင် အောက်က tool လေးကို download ဆွဲပါ။
Download Y300C One Key Tool
ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပါ။ volume - နဲ့ power ခလုတ်ကိုတွဲနှိပ်ပြီး ဖုန်းကိုဖွင့်ပါ။
အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း Bootloader Recovery ကိုနှိပ်ပါ။ခနစောင့်ပါ။ ဖုန်းက restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် CWM Recovery သွင်းခြင်းပြီးပါပြီ။
အောက်ကဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး ဖုန်း ရဲ့ sd card ထဲကိုကူးထည့်ပါ။(zip file ကိုဖြည်စရာမလိုပါ)
Download Y300C Root File
ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။ volume + နဲ့ power ခလုတ်နှစ်ခုကို တွဲနှပ်ပြီး ဖုန်းကို recovery mode ထဲကိုဝင်ပါ။
volume - , + ခလုတ်တွေနဲ့ ဒုတိယ စာကြောင်းကိုရွေးပြီး power ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။
ထပ်ပြီး ၄ ကြောင်းမြောက် စာကြောင်းကို သွားပြီး power တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
y300c root file ကိုရွေးပြီး power ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ လာရာလမ်းအတိုင်းပြန်သွားပြီးဖုန်းကို restart ချလိုက်ပါ။
ပြန်တက်လာရင်တော့ superuser ပါတဲ့ root access ရရှိတဲ့ဖုန်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီပေါ့ဗျာ။
credit ပေးထိုက်သူများအားလုံးနဲ့ chinese website များကို credit ပေးပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, April 06, 2013
Sanny Maung said...
Than Kyaw Oo said...
Thank brother , god bless you...
ko myat said...
Unlock code တောင်းတာ အစ်ကိုပြောသလိုလုပ်တာပဲ wrong information ပဲလာပြနေတယ် ကျနော်ရိုက်တာများမှားသလားလို့ သေချာ ပြန်ကြည့်တော့လည်း အကုန်လုံးကမှန်နေတာပဲ အထပ်ထပ်အခါခါစမ်းလည်း မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တခြားနည်းလေးများရှိရင် ထပ်ပြောပါဦး။ ကျေးဇူးပါ
CWM Recovery သွင်းတာ မအောင်မြင်ဘူးအကိုရေ.....ဘာနဲ့ထပ်လုပ်လို့ရအုံးမလဲ....မြန်မြန်လေးအကြောင်းပြန်စေလိုပါတယ်...
unlock code တရုတ် ဆိုက်ကနေ y300cအတွက်
can anyone help me please, most of the word in my computer it only shows square box. thanks
V Root 1.4 နဲ့ root တာ OK တယ် ကျနော်စမ်းပြီးပြီ error ကင်းတယ်
V root နဲ့အဆင်ပြေတယ် ONe Key လေးတော့ ဆွဲသွားပြီ CWM သွင်းချင်လို့ ကျေးဇူးအထူးးးးးးးး
De Ye Jar said...
အထက်​က ကိုထက်​​အောင်​​ပြောသလိုပဲ..ကျွန်​​တော်​လဲ..အားလုံးမှန်​​အောင်​ဖြည့်​​ပေးတာကို ..အီး​မေးထဲမှာ..Wrong information ဆိုပြီး unlock code ရှာမရပါဆိုပြီး..ပြန်​ပို့တယ်​..ကျွန်​​တော်​က​တော့ မမှားဘူး..​သေချာတယ်​..
Myint Myat Aung said...
S/N နဲ့ MEID ကဘာလဲအကို​ရေရှင်းပြ​ပေးပါဦး​နော်​
Huawei unlock.exe က​ဒေါင်းလို့မရဘူး
Huawei G520-0000 Stock Recovery
Huawei C8813 နှင့် 1500 တန် Sim Card
Huawei T8828 Root လုပ်ခြင်း(Real Working)
Huawei Y220t & Y210t root လုပ်နည်း
Huawei G520-5000 Root လုပ်ခြင်း